Ny sarin'i Aaron Tilley dia hahatonga anao hitebiteby raha vao mahita azy ireo | Famoronana an-tserasera
Manampy antsika ny GIF mihetsika sambory ireo segondra ireo izay mitranga zavatra mahatsiravina ary ahafahantsika mizara azy ireo amin'ny namantsika na fianakaviantsika ka eo alohan'io fotoana tsy azo averina io.
Zavatra mitranga amin'ny sarin'i Aaron Tiley, satria misambotra ireo fotoana ireo izay hitranga zavatra mahatsiravina ary izany dia mametraka antsika amin'ny hozatra. Ny tranga toa an'io ranomainty mainty io izay saika hianjera amin'ny lobaka fotsy tsy misy pentina na andalana vatosokay izay ho latsaka amin'ny vera champagne, dia ny sasany amin'ireo sary namely ny fantsika ka saika niantsoantso an'ilay momba ilay hitranga.
Ity andiana sary ity dia avy amin'ny magazine Kinfolk izay nifandray tamin'i Aaron Tilley ary Kylew Bean hamerina hamerina izany fotoana izany rehefa misy zavatra mahatsiravina hitranga.
Ny tetikasa dia manasongadina ny mahaliana fifandraisana misy eo amin'ny zavatra tsapan'ny saina ary ny fihetsiky ny vatana. Ny fiandrasana dia mahatonga ny vatana hamoaka adrenaline, na dia tsy misy zavatra tena mitranga aza, ary io fihetsika io dia inoana fa mifandray amin'ny valin'ny tolona na hazakazaka izay tena nilaina tamin'ny fahaveloman'ny razambentsika.
Natao ny sary mamorona ny fahatsapana fanahiana ary ny tsy fahazoana aina rehefa mieritreritra mialoha ireo trangan-javatra mahatsiravina izay efa hitranga isika. Asa tena tsara amin'ny fakana sary sy amin'ny firafitr'i Bean, talen'ny talen'ny famoronana fotoana tsy mety tianay ho hita, toy ny ohatra amin'ny akanjo fotsy misy azy saika hianjera ranomainty mainty.
Manana ny tranonkala ianao nataon'i Aaron Tilley ho an'ny midira amin'ny sisa amin'ny asa amin'ny sary sy ireo sary mampihomehy.
Borsi mitondra antsika amin'ny karazana sary hafa mankany amin'ny surrealism.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Sarin'i Aaron Tiley na "rehefa hisy zavatra mahatsiravina hitranga"